Maxkamada magaalada Galkacyo oo xukuntay 32 qof oo lagu eedeeyey dunuub kala duwan. – Radio Daljir
Galkacyo Mar 06 – Maxkamadda darajada 1-aad ee magaalada Galkacyo ayaa maanta xukunno ku ridday 32 qof oo loo haysto galitaanka falal dambiyeedyo ka dhan ah amniga, anshaxa, dhaqanka suubban iyo diinta islaamka.
Danbiilayaashaan oo dhammaantood ahaa dadkii lagu qabqabtay hawl-galladii ciidamada amniga muddada toddobaadka ah ka wadeen magaalada Galkacyo, ayaa lagu soo oogay danbiyo isugu jira ka-ganacsiga khamriga, cabidda iyo cunidda waxyaabaha maanka dooriya, khal-khal-galin amni iyo arrimo kale oo la xiriira ku-tumasho anshaxa iyo dhaqanka suubban ee islaamka.
Maxkamadda ayaa markii ay dhagaysatay danbiyda dacwad oogayaashu ay ku eedeeyeen dadkaan, ayaa waxaa ay cuskatay qodobbo muhiim ah oo muujinaya heerka ciqaabtoodu ay gaarsiisan tahay, iyadoo maxkamaddu si rasmi ah ugu dhawaaqday xukunnada dadkaasi oo iskugu jiray xarig sanado iyo bilo u kala qaybsan iyo sidoo kale ganaaxyo lacageed.
Labo ka mid ah ragga maxkadamadda la horgeeyey waxaa lagu xukamay min hal sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaarsiisan 20 milyan oo shilin Soomaali ah, halka labo kale oo dadkaasi ka mid ahna lagu xukumay min hal sano oo xarig ah iyo min 15 milyan oo ganaax ah.
Dhan kale, 28 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa iyana lagu xukumay min 6 bilood oo xarig ah, taas oo ka bilaabanaysa xilliga xukunkoodu uu dhacay sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda daraja 1-aad ee degmada Galkacyo Sh. C/naasir Cabdulle Jaamac.
Dadka maanta la horgeeyey maxkamadda ayna xukuntay ayaa dhammaantood ahaa dadkii lagu soo qabqabtay hawl-galladii amniga ee magaalada Galkacyo, waxaana badankooda laga soo xirxiray xerada Dayax oo 7 maalmood ka hor ciidanka amigu ay kala wareegeen dadkii degganaa.